MIHAMAFY NY FEPETRA RAISIN’NY FANJAKANA : Hatoka-monina tanteraka Antananarivo sy Toamasina
Mihamafy hatrany ny fepetra sy ny fandraisan’andraikitra raisin’ny fitondram-panjakana hisorohana ny fihanaky ny tsimokaretina “Covid-19”. 25 mars 2020
Hatreto mbola voasokajy ho faritra mena amin’ity valanaretina ity ny eto Antananarivo sy ny any Toamasina.
Mba hifehezana faran’izay haingana ny fihanaky ny aretina dia tsy maintsy manamafy ny fanidiana ny fivezivezena amin’ireo faritra ireo ny Fanjakana. Nambaran’ny Minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Tianarivelo Razafimahefa izay sady filohan’ilay ivon-toerana fandrindrana ny ady atao amin’ny “Coronavirus” eny Ivato fa miato avokoa ny fivezivezena rehetra mihazo an’Antananarivo sy miditra eto Antananarivo, ary tahaka izany ihany koa ny any Toamasina. Mihidy tanteraka ireo Faritany roa ireo, tsy azon’ny mponina atao ny mivoaka ny tanàna ary tsy azon’ireo avy any amin’ny Faritra hafa ihany koa ny miditra. Nanamafy ny Minisitra fa tsy tokony ho tia tena ny olom-pirenena izay mihevitra fa ny fialana eto an-drenivohitra no vahaolana hiarovany ny tenany. Nahitsy ny Minisitra raha nilaza fa raha tena tia tanindrazana ny olona iray dia tokony hanaja an’ireo fepetra napetraky ny fitondram-panjakana, izany hoe, ny fihibohana ao an-trano mba hifehezana ny fifindran’ilay tsimokaretina. Hentitra, araka izany, ny fanaraha-maso ny fivezivezen’ny fiara. Nohamafisina ny fepetra napetraka ka tsy maintsy maka fahazoan-dalana manokana miainga avy eny anivon’ny ivon-toerana fandrindrana ny ady atao amin’ny Covid-19 eny Ivato ireo fiara izay tsy maintsy mivezivezy.
Nilaza ny Minisitra fa ireo fiara voatokana ihany, toy ny mpitandro filaminana sy ireo mpitsabo manao ny asany ihany no tokony hahazo an’io fahazoan-dalana io. Ankoatr’izay dia azo ekena ihany koa ny antony goavana toy ny fitondrana razana sy ny fitondrana marary ho entina hiditra hopitaly eto an-drenivohitra. Noraisina ireo fepetra ireo mba tsy hampihanaka ny aretina. Marihana fa nofoanana tahaka izany ihany koa ny sidina anatiny rehetra izay miainga eto Antananarivo mankany amin’ny toeran-kafa sy ny any amin’ny toeran-kafa miditra eto Antananarivo. Mitovy amin’izay ihany koa ny fepetra ho an’ny Toamasina.